Su'aal: Qanjirka daanka hoostiisa?
Author Topic: Su'aal: Qanjirka daanka hoostiisa? (Read 1182 times)
« on: October 19, 2018, 05:28:25 AM »
Dr adiga Iyo bahda somalidoc waad mahadsantihiin100%
Suasheyda waxaa waaye Qanjirka daanka hoostiisa Iyo qoorta ah oo waxyar bararsan waa dhanka bidix Marka dhowr dhaqtarna waan dagay waxeey idhaheen waad fcntahay kuwa qaar ayaa iidiray dhiig mid kalane computer ama alturosound labadabada waxeey dhaheen waxaad tahay maasha alaaaah
Inta aan saas ahayna waa mudo 24 cml ah
Jwb wcn Dr thanks.
Re: Su'aal: Qanjirka daanka hoostiisa?
« Reply #1 on: March 19, 2019, 09:39:21 PM »
Qanjirrada daamanka u dhaw oo bararo waxay astaan uyihiin inuu jiro caabuq ka agdhaw meelahaas sida dhegta, cunaha, ilkaha IWM, qanjirradaasi waxaa la dhahaa "Lymph node" waa qeyb ka mid ah difaaca jirka, Alle wuxuu ugu talagalay in heegaan la geliyo markuu infekshan ay dareemaan. sidoo kale waxyaabaha kicin karo qanjirradaas waxaa ka mid ah xanuuno ku dhaca isla qanjirka laftirkiisa sida: Tiibishada qanjirrada ama xanuunka kansarka qanjirrada ee Lymphoma, marka waa muhiim inaad dhakhtar la xiriirto hadduu qanjirka wili sii bararan yahay.
Su'aal: Xanuun ayaan ka dareemaa feerta bidix naaska hoostiisa?
Views: 4782 November 21, 2011, 09:41:16 PM
Su'aal: Qanjirka kilkilaha oo barara xiliga cadada maxa keeno?
Started by Cayuush OmerBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1638 March 03, 2016, 02:04:10 PM
Views: 1275 September 05, 2015, 12:57:05 PM
Su'aal: waxa i xanuunta naaska bidix hoostiisa?
Started by NimcooyBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1444 April 16, 2015, 09:58:00 AM
Su'aal: Ciridka ilkaha hoostiisa ayaa i xanuuno?
Started by AwliyaBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1311 April 26, 2019, 03:41:11 PM